Vincent van Gogh - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Vincent Willem van Gogh (Önwa àtó 30, 1853 – Önwa asaa 29 1890) bu mgbe mbu onye Dọọch bu Ọ'shí-Nkwúnàányá onye ntènté nke orü ya di mkpà na ǹkà ichié 20 màkà otu àgwà nor na ǹkà ya na charírí nke kpátárá mádu na ányá. Ọ tàrà afúfú nchèkasị na íshí ya kófùrù na mgbe gáfèrè mgbe mbu na ndu ya, na ȯ nwürü na mgbe mádu amághị ya na afọr ó dị 37 shí mgbe ȯ gbàrà onwe yá égbè.
Nsé-onwé Önwa itoolu nke 1889 (F 627), mmánu na ákwúkȯ ntènté, 65 × 54 cm., Musée d'Orsay, Paris.
Na mádu à túfùgịrị yà ȯnu, ewù màkà yá tòrò na afọr byárá mgbe ȯ nwüchàrà. Na úbọchị nke ta, ndi mádu sị ọ bu onye ǹkà di mkpà na nke díkárí ọmá na ákíkó mbu na onye nyérírí ihe na nke ǹkà ógè nsò. Van Gogh è téghị ihe rüo mgbe ọ di na mgbèdè írí na abụọ ndu yá, na ǹkà nke ó kèrè kárírí fùtàrà na afọr abụọ gáwá nke ȯ gùchàrà. O kèrè orü ǹkà rúfwuó púkú abụọ, nke nwéré nke òtìté 900 na nsè 1,100. Mànà màkà ha mághị ya na ndu ya, orü nwèrè àgbà na ǹkà ọmúmú-òhúrü nke byárá mgbe ndu ya mèchàrà. Na úbọchi ta orü ya-dí kà nke ó sèrè onwé ya, na àlà, na íshí ndi mádu na ìfulūánwü-dì na ǹkà di ókȯ ȯnu na nke mádu màkàrì.
Van Gogh bìrì na mbu ó di dímkpà na orü di ne ré ǹkà na ȯ fụrụ íjè na ímé Den Haag, London na Paris, na mgeb ȯ fùchàrà ȯ rü ka ónyé nkúzí na England. Ihe ȯ chọrí bu na mgbe mbu bu onye ụkò Jésu na Í gbaasà okwu Jésu, shí 1879 ȯ rürü ka onye íjè okwu Jésu na ébé ha na bá àlà na Belgium. Mgbe ógè nké ȯ bu mgbe ó bịdọrọ Í sé mádu shí ébé ȯ nọr, na ímé afọr 1885 ó tèrè orü ya ukwu nke mbu The Potato Eaters. Éféré àgwà ya na ógè áhù jùrù na àgwà nke chárá kà ájá na o zígì àgwà nke chárírí ka nke ȯ gi kè. Na Önwa àtó nke afọr 1886, ȯ gàrà Paris na ngáhù ȯ hùrù nkwúnàányá nke ndi France. Na ógè gáfèrè ȯ gàrà nledà anyanwu France na ȯ hùrù ánwü chárá ike nà ányá. Àgwà ya charìrì na élú na orü ya, na o nwètèrè ágwà nke ya di iche nke mádu gi ma mgbe ȯ nọr na Arles na 1888.
Nkè íshí ya kófùrù nke bànyèrè na ímé ihe ȯ tèrè bu ihe nkwúlítá okwu shí mgbe ȯ nwụrụ. Na nke ndí mádu ne mè ka ȯrià ya di kà mmá, ndi nsikwụ tìrì yá ka onye ǹkà di íwé màkà órià gàrà na uzọr orü ya. Nke onye nsikwụ ǹkà Robert Hughes si bu na orü Van Gogh nke mgbèdè zịrị onye ǹkà nor na élú orü ya, di ya na áká na "onye nke ọnụ nke mmili ótụ na úrè na dọ ya bu ihe ọ chọrọ".
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_van_Gogh&oldid=60512
Last edited on 3 Ọnwa isii 2017, at 05:01
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 3 Ọnwa isii 2017, mgbe 05:01